Ciidamada TFG-da oo Maanta hakad geliyay Dhaqdhaqaaqii Ganacsi ee Suuqa Bakaraha | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamada TFG-da oo Maanta hakad geliyay Dhaqdhaqaaqii Ganacsi ee Suuqa Bakaraha
MUQDISHO (Keydmedia) - Ciidamo ka tirsan kuwa TFG-da ayaa Maanta waxa ay hakad geliyeen gebi ahaan Dhaqdhaqaaqii ka jiray Suuq weyn ee Bakaaraha kadib Howlgallo Buburin ay halkaasi ka sameeyeen.
Howlgalkan ay Ciidamada ka sameeyeen Gudaha Suuqa weyn ee Bakaaraha ayaa ahaa kuwa lagu burburinayey Goobaha Ganacsi ee ku yaalla hareera Waddooyinka Suuqaasi, waxaana maanta hakad galay dhaqdhaqaaqii Ganacsi ee Suuqaasi.
Khaliif Axmed Ereg oo ah Taliyaha Hay’adda Nabad sugidda Gobolka Banaadir ee TFG oo Saxaafadda kula hadlay Goobaha ay burburintu ka socotay ayaa wuxuu sheegay inay u suura gashay inay furaan Sadex wado oo ku yaalla Gudaha Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho.
Wuxuu hadalkiisa intaa ku daray Khaliif Axmed Ereg in Howlgalka ay Maanta ka sameeyeen Suuqa Bakaaraha uusan gaysan wax Khasaaro Naf ama Maal ah.
Sidoo kale Taliyaha Hay’adda Nabad sugidda Gobolka Banaadir ayaa wuxuu intaa raaciyey in Howlgalka uusan ku ekaan doonin kaliya Suuqa Bakaaraha oo ay ka sameyn doonaan Howlgallo noocan oo kale ah suuqyada kale ee ku yaala 16 Degmo ee Gobolka Banaadir.
Haddaba ayadoo Howlgalkaasi ay ciidamada Dowladda ay ku bur buriyeen dhismooyin ay sheegeen inay Sharci daro yihiin ayaa waxaa arrintaasi Cabasho ka muujiyey qaar ka mid ah dadka ku garanacsan jiray Goobahaasi.
Suuqa Bakaaraha waxaa Suuqa ugu weyn Soomaaliya waxaana suuqaasi ka jira Goobo badan ooSsharci daro ah oo ka dhisan hareeraha Wadooyinka soo gala Suuqaasi, waxaana inta badan marka uu Suuqaasi dab ka koco adkaata in Suuqa Gudaha loogalo oo Gaadiidka Gurmadka ay gaaraan, balse taas ayaa haatan u muuqanaysa inay laga gudbay.
Booliska ayaa sheegay in ninka la dilay lagu Magacaabi jiray Xuseen Sheekh Muxumad Sandheere, iyagoo baaritaan ku haya kiiska dilkiisa.